Kulungile kakhulu kwiRyanair, iWizz Air, i-EasyJet, iVolotea isohlwayo sabakhweli abakhubazekileyo nabantwana
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Kulungile kakhulu kwiRyanair, iWizz Air, i-EasyJet, iVolotea isohlwayo sabakhweli abakhubazekileyo nabantwana
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Tourism • uthutho • Iindaba ezahlukeneyo
Igunya lezohambo ngenqwelomoya
Emva kokumisela isohlwayo sama-35,000 e-euro kwiRyanair, iWizz Air, i-easyJet, kunye neVolotea, ezi nqwelo moya ziya kuhlala zikwimeko eqhubekayo ye-Italian Civil Aviation Authority (ENAC).
Ngokwe-ENAC, ezi nqwelo moya zibiza ixabiso eliphantsi ziyaqhubeka nokuhlawulisa ngakumbi kwabo bahamba nabantwana okanye nabakhubazekileyo.
Inyathelo likaxakeka laqala ukusebenza nge-15 ka-Agasti ka-2021, ukuthintela intlawulo eyongezelelweyo yezihlalo zokuba kunye.
I-EasyJet iphendule kwangoko ichaza ukuba isityholo kwaye intlawulo ayinasiseko.
Iinqwelo-moya ezinamaxabiso aphantsi, ngokwe-ENAC, zinetyala "lokuqhubeka nokubiza izongezo kulwabiwo lwezihlalo ezikufutshane nabanakekeli babantwana nabakhubazekileyo."
"Ukususela kwiitsheki zokuqala ezenziweyo," ENAC Qaphela, ezi nkampani “zisilele: azikabikho, njengoko kumiselwe kwaye zaqinisekiswa yijaji yezolawulo, ziyitshintshile i-IT kunye neenkqubo zokusebenza, kwaye ngexesha lokubhukisha, ziyaqhubeka nokucela isongezelelo kwiindleko zetikiti lomoya ukunikezelwa kwezihlalo ezikufutshane nabanakekeli babantwana nabakhubazekileyo, ngaphandle, ukuba kukho imfuneko, imbuyiselo. ”
Ngesi sizathu, iGunya "liqalisile ngenkqubo yokuwisa isohlwayo" ngokuchasene nabathwali aba-3. Izohlwayo - njengoko zixeliwe nguCorriere della Sera- ziyakuthi zihambelane nokungazalisekiswa kwaye "zinokusuka kubuncinane be-10,000 euros ukuya kuthi ga kuma-50,000 XNUMX kwimbambano nganye."
Ulwabiwo lwasimahla lwezihlalo kubantwana nakubantu abanokuncitshiswa kokuhamba kufutshane nabazali babo kunye / okanye abanonopheli kuqinisekiswe yinkqubo engxamisekileyo ekhutshwe yi-ENAC kwaye ibisebenza ukusukela nge-15 ka-Agasti ka-2021.
EasyJet uphendule kwangoko ngesitetimenti, eqinisekisa "ukuba isebenze ngokuthobela imigaqo esebenzayo kwaye ukuqaliswa kwenkqubo yokuwisa isohlwayo akunasihlahla."
Ukhumbula ukuba inkampani, "yabela izihlalo iintsapho ngokudibeneyo, oko kuthetha ukuba abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 kunye nabantu abanokuhamba okuncinci bahlala ecaleni komntu omdala ohamba naye ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo."
Abasemagunyeni banyanzelisa ukupheliswa kwentlawulo eyongezelelweyo kwaba bakhweli ngoJulayi 17, 2021. Emva koko i-TAR yamisela ukungena komlinganiso kude kube semva kuka-Agasti 15. Ngoku umhla wokugqibela udlulile, kodwa abo bacela ukuhlala kwindlu Umntu omncinci okanye okhubazekileyo ohamba nabo usahlawuliswa ngesongezelelo.